Ibe ya bụrụ Ọkụ, Gas Generator, Reheating Ọkụ - Yinuo
Rolling Steel Heating Ọkụ
ibe ya bụrụ Ọkụ
Gas Okpomọkụ Ọgwụgwọ Ọkụ
Heating Ọkụ Ngwa
Regenerative Heating Ọkụ
Kwụpụ Heating Ọkụ
Otu ton ibe ya bụrụ ọkụ gas kpo oku oku
Uru: High combustion arụmọrụ, emission zaa iru iji nweta National Environmental Standards; N'ụzọ zuru ezu akpaka okpomọkụ akara, elu kpọmkwem okpomọkụ akara; Nwere ike na-ndekọ nke okpomọkụ, nrụgide na mkpu maka n'elu otu ọnwa. High nchekwa na-akpata, na a dịgasị iche iche nke kpatara mkpu ndia; A ole na ole nke nozzles, ala mmezi-akwụ ụgwọ. Summary: gburugburu ebe obibi-echebe ma na ike ịzọpụta, elu ogo akpaaka, elu arụmọrụ, mma ma a pụrụ ịdabere na. Anyị Company? ...
Industrial na-eje ije doo ọkụ Ahịa -...
China Factory OEM eje ije doo reheating ọkụ
N'ekwú Type Hot Air ekesa Okpomọkụ Ọgwụgwọ ...
1) Ọkụ lining Njirimara Iji ngwa ngwa ikpo elu oké ọku, Chekwa oriri ike, na na-ejikwa sensitively, ụlọ, n'akụkụ na azụ mgbidi lining adopts full eriri structure.To dịkwuo ike nke oku etiti, na oku ala na bogie akụkụ bonded brick-ewu ọkụ na-eguzogide emep uta eri. Ọdịdị nwere ndị na-esonụ e ji mara: A. Light arọ, obere okpomọkụ nchekwa B. Good mkpuchi, ọkụ mgbidi bụ ala-okpomọkụ (n'akụkụ elu nke oku okpomọkụ ịrị elu o ...
Environmental Protection na Technology Co., Ltd. dị na ebe ndị mara mma nke Xuzhou obodo. Jiangsu ógbè elu na nkà na ụzụ ọhụrụ ulo oru mmepe mpaghara, ụlọ ọrụ na-ekpuchi ebe ihe karịrị 70000 square mita, ewu ebe ihe karịrị 50000 square melers, ofu akụ 100 nde yuan, na management, ọkachamara na lechnical na-ewu ụlọ ịgbado ọkụ quality mkpara karịa mmadụ 400. Anyị factory nwere ike oru ọhụrụ ike na nwere ihe karịrị 10 palents nke mmekọ nlereanya na mepụtara technology wdg
Kedu usoro usoro kpo oku a na-emebu maka ikpo ọkụ ọkụ
A na-ejikọ ụlọ ọkụ na-eme ka ọkụ ọkụ na-esote akụkụ ndị a: n'ime ọkụ, sọftụwia ihe sistemụ, sọftụwensị ventilashion, sistemụ mgbochi anwụrụ ọkụ, na sistemụ friji. Waste okpomọkụ mgbake na itinye n'ọrụ na ngwaọrụ, wdg regenerative kpo oku oku oku ...
Kedu ihe ekwesịrị ị paida ntị na ọrụ nke igwe ọkụ ọkụ ọkụ?
Kedu ihe dị iche iche ị kwesịrị ị attentiona ntị na mgbe ị na-eji ọkụ ọkụ na-agbanye ọkụ? Ndi otutu mmadu na-ejikarita igwe oku eji eme oku? Iji gbochie ọtụtụ mmadụ ịmejọ ihe na usoro ọrụ, ọtụtụ ndị kwesịrị ịkpachara anya Gụọ isiokwu ahụ, e ...
North of Changcheng Road, nke-atọ ulo oru ogige nke Xuzhou High-tech Mpaghara
Ring Ọkụ, Natural Gas Ọkụ , Industrial Electric Ọkụ , Continuous Annealing Furnace, Abụọ Stage Kol Gasifier , Steel Hardening Furnace,